Zimbabwe summons US envoy over George Floyd comments - World - The Jakarta Post
Harare, Zimbabwe / Mon, June 1, 2020 / 07:16 pm
Demonstrators carry placards with slogans as they march near the US Embassy in London on May 31, 2020 to protest the death of George Floyd, an unarmed black man who died after a police officer knelt on his neck for nearly nine minutes during an arrest in Minneapolis, US. (AFP/Daniel Leal-Olivas)
In a Sunday interview with ABC news, US national security advisor Robert O'Brien referred to Zimbabwe and China as "foreign adversaries" using social media to stoke unrest and "sow discord".
The United States has been rocked by days of sometimes violent protests after Floyd, an African-American, died while a white police officer knelt on his neck, ignoring complaints he could not breathe.
Zimbabwe's foreign ministry spokesman James Manzou said US ambassador Brian Nichols had been called in to explain O'Brien's remarks.
"As I am speaking to you now he is in a meeting with my minister," Manzou told AFP in the capital Harare on Monday.
Government spokesman Nick Mangwana said Zimbabwe did not consider itself "America's adversary".
"We prefer having friends and allies to having unhelpful adversity with any other nation including the USA," Mangwana tweeted late Sunday.
Zimbabwe-US relations have been tense since the Washington imposed sanctions against former president Robert Mugabe and members of his inner circle in 2002 over rights abuses.
Those sanctions were extended in March of this year, with Washington citing President Emmerson Mnangagwa's failure to implement reforms as well as his violent crackdowns on opposition since he took power in 2017.
A senior Zimbabwean official quoted by the state-owned Herald newspaper denied O'Brien's accusations.
"Anyone who has seen the genesis of recent events, from the tragic death of Mr Floyd to the subsequent protests, will realise that any accusations of Zimbabwean involvement at any stage is farcical," the unnamed official said.
George-Floyd US-racism US-race-protests Zimbabwe